I-Wacom ibonelela ngesisombululo sokuguqula iifom zamaphepha zibe zidijithali kunye nebhodi eqhotyoshwayo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
IWboard Clipboard, iguqula amaxwebhu ephepha abe yifomathi yedijithali ngexesha lokwenyani
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo iWacom yazisa ngebhodi eqhotyoshwayo, isixhobo esivumela abasebenzisi ukuba gcwalisa kwaye utyikitye amaxwebhu ngendlela yesiNtu, nangona inqaku elikhulu lokuziguqula zibe kwifomathi yedijithali ngexesha lokwenyani.
IWboard Clipboard inezinye izinto ezinje ukukwazi ukufaka kunye nokongeza iisiginitsha ezibhalwe ngesandla zebhayometri. Masithi iba yi-smartpad egqibeleleyo yezo nkampani zingafuniyo ukuncama, okwangoku, iphepha kwiifomathi zalo ezahlukeneyo ezinjengeefom zamaphepha.
Phambi kwebhodi eqhotyoshwayo yeWacom sijongane nebhodi eqhotyoshwayo yombane leyo uyakwazi ukuvumelanisa nePC okanye isixhobo esiphathwayo ngeBluetooth. Ikwanayo, inokuba yintoni enye into, unxibelelwano lwe-USB, ngakumbi eyilelwe iiPC.
Indlela esebenza ngayo ithe tye ngokubeka uxwebhu kwiWacom Clipaboard, ukuze kuthi xa umfundi eyakhelwe ngaphakathi ibhakhowudi, ube nakho chonga ngokuzenzekelayo kwaye wazise isixhobo okanye iPC ukuba ingxelo yedijithali iyafumaneka. Inyathelo elilandelayo kukuthatha ipeni ebandakanyiweyo, ukwenzela ukuba umsebenzisi akwazi ukugcwalisa iphepha.
Yonke imivumbo eyenziwe ngosiba iyabanjwa kwaye badlulisela ngexesha lokwenyani kwaye basetyenziswa ngokuzenzekelayo kuxwebhu lwedijithali. Itekhnoloji esetyenzisiweyo kwesi sixhobo kukuphinda kusebenze ngombane.
UWacom uhamba nesixhobo sakho nge-CLB Yenza kunye nePhepha le-CLB, Izicelo ezibini zokuyila iifom ubambe, uqhubekeke, kwaye ugcine kwifomathi yedijithali yonke into ebhaliweyo ngebhodi eqhotyoshwayo.
Ingayiyo ifunyenwe ukusuka esiphelweni kuJulayi y unako ukufikelela kule khonkco Ngolwazi oluthe kratya kule mveliso intsha yakwaWacom, enye yeengcali ezikolu hlobo lwesixhobo bobabini bayili kunye neengcali kwicandelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » IWboard Clipboard, iguqula amaxwebhu ephepha abe yifomathi yedijithali ngexesha lokwenyani
Abona baqulunqi begraphic babalaseleyo abavela kwiLatin America nakwilizwe liphela